Dick ၏အားကစားပစ္စည်းများအီးမေးလ်ဖြင့်လူမှုမီဒီယာများမောင်းနှင်ခြင်း Martech Zone
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကအီးမေးလ်အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုအသွားအလာသို့ပို့ဆောင်ရန်အတွက်တကယ့်အတားအဆီးမရှိသောနည်းလမ်းကိုဥပမာပြလိုက်သည် လူမှုမီဒီယာ။ အီးမေးလ်ကလာတယ် Dick ၏အားကစားပစ္စည်းများ.
၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအီးမေးလ်ဖြစ်သည်။ Twitter တွင်ကျွန်ုပ်တို့နောက်သို့ လိုက်၍ အထူးသီးသန့်အထူးလျှော့စျေးကိုခံယူပါ:
ထိုတောက်ပသောဆိုရှယ်မီဒီယာသစ်တစ်ခုသို့လမ်းကြောင်းကိုပို့ရန်ဒစ်ခ်သည်ရိုးရာကိရိယာတစ်ခု၊ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းကိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေသူတော်တော်များများကသတိမထားမိကြတာကဆိုရှယ်မီဒီယာကောင်းကောင်းရှိခြင်းဟာဆိုင်တိုင်းမှာလူတစ် ဦး စီကိုခန့်ထားခြင်းသာဖြစ်ပြီးလူတွေကိုသင့်ကိုတွေ့ဖို့စောင့်နေတာပဲ။ လူတို့နှင့်သင်စတင်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်အတွက်သင်အမှန်တကယ်ယာဉ်မောင်းကိုမောင်းရမည်။ ရိုးရှင်းသောအယူအဆ၊ ကျွန်ုပ်သိသော်လည်းသင်၏လူမှုရေးမဟာဗျူဟာကိုသတ်မှတ်သောအခါသတိမမူမိသောအရာများ။
တွစ်တာတွင်ဒစ်၏အားကစားကုန်ပစ္စည်းများကိုလိုက်နာရန်မက်လုံးပေးရုံတင်မကဘူး၊ အထူးသဖြင့် (အနည်းဆုံးသူတို့၏တွစ်တာနောက်လိုက်များထံမှ) ကမ်းလှမ်းမှုသည်သင်၌အခြားမည်သည့်အရာမျှမရရှိဟုခံစားရစေသည်။ သင်သည် Dick ၏အားကစားပစ္စည်းများတွစ်တာတွင် ၀ င်ရောက်နေပြီးသင်ယင်းမှအကျိုးရရှိသည်။
၎င်းသည်ပျော့ပျောင်းသောရောင်းခြင်း၊ ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်ခြင်းမရှိသောကြောင့်အရေးယူစရာများစွာမလိုအပ်ပါ။ အဲဒါတစ်ခုထက်ပိုပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာမင်းသိတယ်။
ဒီမဟာဗျူဟာကို သုံး၍ ဒစ်ခ်ျထံမှ ၀ င်ရန်သို့မဟုတ်ဝယ်ရန်ကျွန်ုပ်၏ရိုးရာအတားအဆီးများစွာကိုဖယ်ရှားခဲ့သည် link ကိုလိုက်လျှောက်ရန်၊ လိုက်နာရန်ကိုနှိပ်ပါ၊ skont code ကိုရယူရန်လွယ်ကူပြီးယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်လျှော့စျေးကုဒ်ရှိပါကကျွန်ုပ်၏နောက်ခြေလှမ်းမှာရှိသည် ဖြစ်နိုင် စျေးဝယ်ထွက်ရန်အကြောင်းပြချက်မပြည့်မချင်းကျွန်ုပ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုခုရှိမရှိသိရန်သူတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့တောက်ပခဲ့သည်!
10:2009 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 5, 27
ထို့ကြောင့်လူမှုရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်အသုံး ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာ / ဖြေရှင်းမှုများအပြင်ပါ ၀ င်မှုနှင့်အသိအမှတ်ပြုမှုတို့ဖြင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်။ "အစဉ်အလာ" အီးမေးလ်ကမ်းလှမ်းမှုသည်ကုမ္ပဏီ၏ရောင်းလိုအားအပေါ် အခြေခံ၍ ဖန်တီးသော်လည်းလူမှုရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်လူမှုအသိုင်းအ ၀ န်းအားကမ်းလှမ်းမှုကိုဖန်တီးရန်နှင့်၎င်းအားမြှင့်တင်ရန်နှင့်ပိုမိုအာရုံစိုက်ရန်ဖြစ်သည်။
11:2009 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 2, 37